Linux nivadika 28 taona taorian'ny nanambarana azy tamin'ny vahoaka | Avy amin'ny Linux
Linux dia nankalaza ny 28 taona nanambarana azy imasom-bahoaka
Feno 28 taona i Linux omaly hatramin'ny nanambaran'i Linus Torvalds mpamorona azy, Raha manisa izany isika hatramin'ny 25 Aogositra 1991, ny taona nanambarana voalohany ny fanambarana fisian'ny Linux amin'ny ho avy. Hatramin'ny famoahana ampahibemaso voalohany ny kernel Linux dia natolotra tamin'ny 17 septambra.
Io Linux Kernel 0.0.1 voalohany io izay navoaka ho an'izao tontolo izao dia 62 Kb ny habeny amin'ny endrika voafintina ary misy tsipika kaody 10 eo ho eo (ampitahaina amin'ny kernel Linux amin'izao fotoana izao izay manana kaody kaody mihoatra ny 26 tapitrisa).
Amin'izay fotoana izay, Ny fanangonana hevitra nataon'i Linus Torvalds dia nameno ny ezaka famaritana ny Minix.
Raha ny tena izy, tsy sahala amin'ny safidin'ny Profesora Tanenbaum hipetraka amin'ny Minir amin'ny microkernel, i Linus dia nifidy ny hijanona eo amin'ny Unix Foundation ary handray rafitra fototra monolithic ho an'ny rafitra fiasa izay entanin'ny fivoarana ao anatin'ny Minix.
“Heveriko fa ny famolavolana fotokevitra monolithic tamin'ny taona 1991 dia hevitra tena ratsy. Mifalia fa tsy mpianatro ianao. Tsy hahazo naoty tsara ho an'ny famolavolana toy izany aho, ”hoy i Tanenbaum tamin'i Linus. Raha ny marina, nilaza ny profesora fa ny hoavin'ny rafitra miasa dia tsy miankina amin'ny core monolithic fa amin'ny micro-core.
Toy izao manaraka izao ny fanambaràn'i Linus Torvalds 28 taona:
Salama daholo izay mampiasa Minix. Manoratra rafitra miasa (maimaim-poana) aho (fialam-boly fotsiny, tsy ho zavatra avo lenta GNU) ho an'ny klone 386 sy 486.
Ny tetikasa dia efa niasa nanomboka ny volana aprily ary niova tsikelikely. Te hanana valiny momba ireo zavatra tian'ny olona na tsy tiako aho ao amin'ny Minix satria toa mitovy kely ny rafitra fiasako (na ny fandaminana ara-batana ny rafitra fisie aza, noho ny antony azo ampiharina, ankoatry ny hafa). Nitafidy bash 1.08 sy gcc 1.40 aho ary mandeha tsara ny zava-drehetra.
Midika izany fa hanolotra zavatra mivaingana aho afaka volana vitsivitsy ary tiako ho fantatra hoe inona ireo fiasa izay ilain'ny mpampiasa indrindra. Raisina an-tanan-droa ny soso-kevitra rehetra, saingy tsy afaka mampanantena aho fa hampihatra azy rehetra.
Fampitandremana: Ity rafitra fiasa ity dia tsy mifototra amin'ny kaody Minix ary ny rafitra fisie dia manohana kofehy maro. Tsy azo entina izy io ary mety tsy hanohana na inona na inona afa-tsy ny kapila mafy AT, satria izany no ananako, ”hoy izy nanoratra avy eo.
Ny fanokafana ny kaody loharano ho an'ny vondrom-piarahamonina, ho azy, dia natao ny taona manaraka.e (1992) ambanin'ny fahazoan-dàlana GPL.
Nanomboka tamin'izay, ny fialamboly izay natao ho an'i Linus Torvalds taloha lasa tetikasa lehibe io. Tamin'ny taona 2018, ny tahiry kernel Linux dia nahitana rakitra 61,725 ho totalin'ny kaody 25,584,633.
Ity, raha tsy hiresaka afa-tsy ny antontan-taratasy, fisie Kconfig, mpamosavy ary fitaovana sns. Rehefa afaka roapolo taona mahery dia mitohy ny fampandrosoana Linux.
Tamin'ny taon-dasa, ny tetik'asa dia nandrakitra fitambarany 782,487 19,000 avy amina mpanoratra mihoatra ny 3. Mampiseho ny hafanam-pon'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fandraisana andraikitra izay tohizan'i Linus Torvalds ho iray amin'ireo mpamatsy vola matetika indrindra. Raha ny marina, ny manam-pahaizana manokana momba ny IT Finnish dia XNUMX% ihany amin'ny volavola rehetra tamin'ny taon-dasa.
Na dia mandraka androany aza dia tsy afa-po i Linus Torvalds amin'ny zava-nitranga tamin'ny famoronana azy Amin'ity indostria ity dia manodidina ny 3% ny rafitra miasa tsena, tarehimarika izay mihevitra azy io ho tsy fahombiazana eo amin'ny tsenan'ny rafitra miasa eo amin'ny birao.
Ary amin'ity raharaha ity dia an'ny tenany ihany Linus Torvalds niresaka momba io lohahevitra io tsy ela akory izay ary Napetrany ny tsy fahombiazan'ny Linux noho ny fanaparitahana ny tontolo iainana.
Na dia eo an-dafin'ny vola madinika aza raha resaka rafitra ho an'ny supercomputers Linux no iray manarona saika ny zava-drehetra.
Hatramin'izay dia maro amin'ireo izay misalasala amin'ny Linux no afaka mahatsapa ny fandraisan'anjaran'ny Linux amin'ny sehatra lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Linux dia nankalaza ny 28 taona nanambarana azy imasom-bahoaka
Tsy maintsy manohy manohana rindrambaiko maimaimpoana izahay.
Ny Linux Foundation dia nanambara ny Confortial Computing Consortium